“Macalimuu wuxuu ahaa qof aan ku aaminay nafteyda” Mary Harper. | Salaan Media
Home Wararka “Macalimuu wuxuu ahaa qof aan ku aaminay nafteyda” Mary Harper.
Waxa aan hayaa liiska macluumaadka muhiimka ah ee ku kaydsan taleefankayga. Midigta sare meel ee u dhow, oo ka sarreysa lambarkayga baasaboorka iyo faahfaahinta akoonkayga bangiga, waxaa ku qoran magaca Mucallimuu, lambarka 16.5 iyo ereyadan “jecel kuwo leh midabka buluugga ah iyo caddaanka”.
Ilaa iyo maanta, mar kasta oo aan waco, waxa uu ku bilaabayaa liiska wixii dhacay maalintaas – dilalkii qorshaysan, qaraxyadii, dagaallada siyaasadeed ee gudaha.
Haddii uu Mucallimuu yidhaahdo: “Ha iman” – maan tegi jrin, xitaa haddii xaalku u muuqdo mid deggan. Mocallimow haddii uu yidhaahdo: “Kaalay” – waan imaaddaa, xitaa haddii xaalka ammaanku u eeg yahay mid kacsan.
Soo saare barnaamij, kamarad-yaqaan, cod duube iyo, waxa ugu muhiim ee uu ahaa oo ah saxafi “maxalli ah”, oo mararka qaarkood aannu ugu yeedhi jirney “hagahayaga”, kaas oo uu aad u yaqaannay wax walba oo kooxda shaqadu u baahan tahay.
Sidee buu saxafigaas daacadda ah ugu biiri karaa “dhinaca kale”?
“Waxaan rabaa inaan isbedel sameeyo, ma sameyn karin taas wariye ahaan, waxaan u baahanahay inaan ka shaqeeyo nidaamka dhexdiisa, waxaan rabaa inaan noqdo xildhibaan, tani waa tallaabadii ugu horeysay ee aan u qaado dhankaas.”